Waxaan Muqdisho kasoo duulnay abaarihii 11:40. Innagoo soo marnay intaayadii musaafurka ahayd 3 jekin oo aiporka Muqdisho ah. Dhabtii waligey intaan adduunka dacaladiisa u kala gooshayey ma aanan arag jekin ka adkaa kan Muqdisho.
Kadib waxay indhaheygu qabteen 3 masuuliyiinta Soomaaliya ka mid ah oo aan filaayo iney ahaayeen wasiir iyo xildhibaano oo iyagana sida shacabkoo kale meel qorax ah taagan oo la baarayo. Sidoo kale waxay indhaheygu qabteen madaxweynihii hore ee Galmudug State Mr Caalim oo qoraxda kuleylkeeda intuu u adkeysan waayey fadhiya dhulka.
Kadib nin Kenyan ah ayaa intuu nasoo dhax maray isagoo ku qeylinaya dadka wata Baasaboorka Itoobiya dhinaca midig ha mareen, meesha ay marayaan dadka wata baasaboorka Kenya. Wuxuu kaloo lahaa dadka deganaanshaha Kenya wato ha mareen sidoo kale dhanka midig.
Annigoo ninkaas la yaaban, ayaan waxaan is weydiiyey horta Soomaaliya soow ka mid maaha dalalka Bariga Africa iyo Igad? Waxaa kaloon is weydiiyey maxay tahay sababta Itoobiyaanka baasaboorkooda loo ciseynayo, halka baasaboorka Soomaaliya oo qurux baddan aan la xushmeyneyn, iyo Kenyanka markey Muqdisho yimaadaan toos uga qaata fiisaha welibo iyagoo 2 -da gacmood lagu soo dhaweynayo ayey dalkeena shaqo u yimaadaan. Diyaaradda aan saarnaana waxaa aad uga buuxay Kenyan dalkeena shaqo usoo raadsadsaday.!
Posted by galmada Net, Published at 10:16 PM and have 0 comments